Home Wararka Puntland oo sheegtay in ay qabatay Kooxo dil ka geystay Gaalkacyo
Puntland oo sheegtay in ay qabatay Kooxo dil ka geystay Gaalkacyo
Saddex qof oo ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug, labo ka mid ahna yihiin saraakiil ciidan ayaa xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobi.
Sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) waxaa fiidkii hore ee xalay waqooyiga Gaalkacyo lagu dilay qof ka soo jeeda Galmudug, dhacdadaas oo sababay in labo sarkaal oo ka tirsan Puntland la afduubo oo lagu dilo koonfurta Gaalkacyo.
Guddoomiye Sanyare oo shir jaraa’id ku qabtay Gaalkacyo wuxuu sheegay in ay gacanta ku hayaan ciddii dilka ka gaysatay dhanka Puntland, sidaas si la mid ahna ay Galmudug ka rajaynayaan in ay soo qabtaan ciddii falka ka gaysatay dhankooda.
Guddoomiye Sanyare wuxuu tilmaamay in Puntland iyo Galamudug ay kuwada jiraan la dagaalanka Al-shabaab, wixii amni-darro ah oo ka dhexdhaca labada maamulna ay u arkaan mid loogu adeegayo Al-shabaab.
Previous articleAbiy Axmad oo u yeeray C/raxman Ciro si uu qeyb uga noqdo heshiiska Somaliland iyo Itoobiya
Next articleDeni oo magacaabay wasiir iyo wasiir ku xigeen ka tirsan golaha xukuumadda Puntland